रुखै रुखले छोपिएको यस्तो अपार्टमेन्ट, बिजुली पनि रुखबाटै हुन्छ उत्पादन « Bizkhabar Online
रुखै रुखले छोपिएको यस्तो अपार्टमेन्ट, बिजुली पनि रुखबाटै हुन्छ उत्पादन
15 January, 2018 1:49 pm
‘ग्लोवल वार्मिङ बढीरहेको अहिलेको अवस्थामा विश्वमा हरियालीको ‘कन्सेप्ट’ विस्तारै विकशित हुँदै गएको छ । विश्वका केही वास्तुशास्त्रीहरुले त रुख तथा बोटविरुवालाई प्रयोग गरेर भवन तथा अन्य पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न थालिसकेका छन् ।
यसैक्रममा इजिप्टको कायरोमा एउटा यस्तो अपार्टमेन्ट निर्माणाधिन अवस्थामा छ । विनसेन्ट सलेबाउट आर्किटेक्चरहरुद्धारा निर्माणाधिन उक्त कार्यलय परिसरमा नौवटा वेलनाकार संरचना रहेका छन् जुन रुखले छोपिने छन् । जसलाई डिजाइनरहरुले ‘मेगा ट्रिज’ नाम दिएका छन् । सो अपार्टमेन्टमा आवश्यक विजुली रुख तथा हावाबाट नै उत्पादन गरिने छ ।
आर्किटेक्चर सलेवाउटका अनुसार सन् २०१४ बाट शुरु भएको सो संरचना सन २०१९ मा सम्पन्न हुने छ ।
यस्ता देखिनेछन् भबिष्यको कार्यलय परिसर
कायरोको हेलीपोलिस जिल्लामा बनिरहेको सो गेट ४.८ लाख बर्ग फुटमा निर्माण भइरहेको छ । यस परियोजनालाइ स्थानीय विकाशकर्ता अबराज मिश्रले शुरु गरेका हुन् । परिसरको आकार दिनलाइ आठओटा भवन एकअर्कासंग टाँसिने छन् । आठैओटा भवनका माथिल्ला तल्लाहरुलाई पुलको माध्यमबाट जोडिने छ, जहाँबाट मानिसहरु सजिलै आवतजावत गर्न सक्नेछन् ।
अझै रोक कुरा छ उक्त तल्लाहरुमा खेलमैदान तथा सानो तरकारी र फलफुलको बगैँचा पनि राखिने छ । त्यहाँ एउटा अनन्त पौडी पोखरी पनि हुनेछ । गेटमा कार्यलयका तिन तल्ला समावेश गरिने छन् । तिन तल्लाको सपिङ मलमा ४ तहको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ तथा १ हजार ओटा ‘स्मार्ट’ अपार्टमेन्टहरु हुनेछन् ।
प्रत्येक आवास मोसन सेन्सर जडित हुनेछन्, जसले घरमा मान्छे भएको बेला आवासको तापमान तथा बत्तिहरु समायोजित हुन मद्धत पुर्याउने छ ।
त्यस्तै आन्तरिक विशेषतामा नौ वटा मेगा ट्रिज तथा बेलनाकार जिवन्त भित्ताहरु रहनेछन्, जसले प्राकृतिक भन्टिलेशन प्रदान गर्नुका साथै कार्बनडाइअक्साइड लिने काम गर्दछ । भवनहरु आंशिक रुपमा सोलार र हावाबाट संचालित हुनेछन् ।
वेल्जीयन आर्किटेक्ट सेलेवाउट हरियालिपुपर्ण संरचना डिजाइनरका रुपमा प्रख्यात छन् । उनी ‘गेटलाइ’ दिगो भविष्यको एक सानो कदममा रुपमा लिन्छन् ।
सेलेवाउटका अरु परियोजना हरुमा बु्रसेल्समा औद्योगिक क्षेत्र सुधारने मास्टरप्लान, वेल्जीयमलाइ लक्जरि आवास द्धारा जोड्ने, रेष्टुराँ, पसल, कार्यालय तथा हरितगृह रहेका छन् । उनको उक्त परियोजनाको फर्म फेबु्रअरिमा स्थानिय सरकारलाइ समिक्षाको लागि पेश गरिएको थियो । उक्त ग्रुप हाल कोरियाको सियोलमा मान्टा रे आकारको फेरि टर्मिनल मा काम गर्दै छन् । यसका लागि जूनमा उक्त डिजाइनको अनावरण गरिएको हो जसलाइ उनिहरुले यसलाइ पनि रुखमा छोप्ने निर्णय गरेका छन् ।
सेलेवाउटका अनुसार यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य पृथ्वीमा हरित प्रभावलाइ दिगो वनाइ ‘ग्लोवल वार्मिङ’बिरुद्ध लड्नु हो ।
कोरोनाका कारण नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा दुई अर्ब बराबरको क्षति, अझै डेढ दशक प्रभाव पर्ने
काठमाडौं । कोरोना भाइरस जोखिमका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र चलचित्र क्षेत्र हो । लकडाउन
विश्वभर घट्दै शिशु जन्मदर, विश्व जनसंख्या र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर
काठमाडौं । गत मे महिनाको अन्त्यमा चीनले आफ्नो पुरानो नीतिलाई परिवर्तन गर्दै ३ सन्तान जन्माउन
को हो विश्वकै धनी ? के जेफ बेजोस इतिहासकै धनी मानव हुन् ?
काठमाडौं । विश्वमा कोही मानिसहरु अथाह धनी छन् । फोब्र्स पत्रिकाका अनुसार सन २०२१ अप्रिल